New Member (JB)
New Member (JB) 1 ọnwa 2 izu gara aga #1828
Abụ m onye ọrụ ụgbọelu FAA lara ezumike nká nke 25 afọ. Ihe ntụrụndụ m B IS ụgbọ elu, ọ dị n’ọbara gị. Enwere m obi ụtọ Rikoooo ebe ọ bụ na nbudata ha bụ ezigbo mma ma nwee njirimara wụnye onwe ha, nke bụ nnukwu enyemaka. Ọ ga-amasị m ịhụ mgbakwunye ọkụ ọkụ GA-8 Airvan tinyere maka nbudata. Daalụ nke ukwuu maka nnabata gị. Atụrụ m anya na nbudata ọdịnihu.
New Member (JB) 1 ọnwa 2 izu gara aga #1829
Ndewo na nnabata gị Rikoooo. Ọ dị mma ịhụ ndị otu ọhụrụ ebe a, ọkachasị na ụdị ọrụ na ihe ọmụma banyere ụgbọ elu RL.
Anyị ga-eme ike anyị iji mee ka ọnụnọ gị ebe a bụrụ nke mara mma.
New Member (JB) 1 ọnwa 1 izu gara aga #1838
Ndewo ebe ahụ.
Achọpụtara m na nzukọ ahụ, okwu mmeghe gị wee bụrụ nke ọma.
Ightsdị ugwu anaghị amasị m, yabụ kacha nso ga-abụ simulator, anọkwala m ebe a ọnwa ole na ole, ịnweta ohere dị mma niile.
Ọ dị mma ịmara na enwere ndị na-anụ ọkụ n'obi ibe anyị ebe a.
New Member (JB) 1 ọnwa 1 izu gara aga #1841
Ekele gị, ọ bụ nnukwu saịtị Mate rịọ maka GA8. Ị ga - esite na OZZIE, e mere ụgbọ elu ahụ ma meekwa ya na Australia.Ọ na - efe efe na australia vitral groupe ma anyị nwere ụgbọelu dị otú ahụ abụọ na ụgbọ mmiri anyị.
Cheers Jim Beale "Biggles"
Oge ike page: 0.210 sekọnd